Kuyini Ukudla Okubandayo Okumisiwe?
Impilo EMINYE iqina umugqa womkhiqizo wokudla owomile iqukethe izithelo, ama-veggies, inyama, ubhontshisi, okusanhlamvu, ubisi, ngisho neziphuzo ezinempilo nezokudla, ngikusindise uhambo oluya ezitolo njalo lapho uphelelwa izithako ezibalulekile ezinjengamaqanda noma ubisi.
Lokhu kudla ngeke konakalise ngezinsuku ezimbalwa… noma amasonto ambalwa. Bahle.
Ngeke uthambise, Ukunciphisa, noma ukusika inyama eluhlaza.
Futhi kunokuqhuma ukunambitheka okwengeziwe ongeke ukuthole kwenye indawo! Thatha nje ukuluma!
Lapho udinga isithako kwenye yezindlela zakho zokupheka zansuku zonke, mane ukhethe umkhiqizo OTHATHA bese uwengeza kumxube- njengoba nje ungathanda ngezithako ezintsha. Ukugcina KUKHONA ekhishini lakho kufana nokuba nemakethe yakho yasekhaya noma isitolo sokudla sasekhaya, ugcwele ngokuphelele konke ukudla okuthandwa ngumndeni wakho. Isikhathi osonga ngokungagijimisi ukubuya esitolo esidayisa ukudla kwasekhaya sizoba isikhathi esibalulekile ongasisebenzisa ekwenzeni imisebenzi oyithandayo.
Zama ukudla okungu-ThriveLife okwenziwe ngabakwaStriveLife namuhla. Zimnandi futhi zinempilo. Izoshintsha indlela othenge ngayo, futhi ulungiselele ukudla.
Ngoba i-THRIVE yenzelwe ukuhlelwa kwemenyu kwansuku zonke, sikwenzile ukuthi kube umsebenzi wethu wokuqinisekisa ukuthi ukudla okudlayo ukunambitheka kuhle! Ngokungafani neminye imikhiqizo yokugcina ukudla efihlwa kude futhi engakaze isetshenziswe, imikhiqizo yethu ihlolwe kaninginingi ukuze iqinisekise ukufakwa kwayo nokunambitheka okuhle. Ngokudla OKUTHILE, ukunambitheka okuhle kuyindinganiso - hhayi okuhlukile.
Izindlela zokupheka ezenzelwe kalula zifakiwe kuzo zonke izindlela ze-THRIVE ngakho-ke awusoze wasala uzibuza ukuthi usebenzise kanjani isitoreji sokudla okuthenga. Ngoba sifuna umndeni wakho ujabulele ukunambitheka okungcono kakhulu kanye nokudla okunempilo, zonke izindlela zethu zenzelwe ngqo imikhiqizo ye-THRIVE.
Ngabe Uyazi Siyathengisa:
OKUHLELWE KUSUKA NGESITHUTHA SESIKHATHI ESIMAHLA SOKUGULA!
Isobho le-Utamatisi elinosiwe